သပြေညီနောင် အောင်ဇေယျမုနိစေတီတော် ရွှေထီးတော်နှင့် ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာတင် အလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနား ကျင်းပ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၈ မေ ၃၀၊ ၂၀၂၀
ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၃
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း)၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ငုကၡေလးေက်းရြာအနီးရွိ သေျပညီေနာင္ ေအာင္ေဇယ်မုနိေစတီေတာ္ ေရႊထီးေတာ္ ႏွင့္ ဗုဒၶါဘိေသကအေနကဇာတင္ အလွဴေတာ္မဂၤလာအခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ၾသ၀ါ ဒါစရိယ၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕၊ ဘန္႔ေဘြးေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲဥတၱရအမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားၾကြေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူၾကၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းထြန္းဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ေဇာ္ ေအး၊ အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္စြာလင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား စည္ကား သုိက္ၿမိဳက္စြာတက္ေရာက္ၾကသည္။
အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး၊ အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားအားေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴ ဒါန္းၾကသည္။ အဆုိပါသေျပညီေနာင္ေအာင္ေဇယ်မုနိဘုရားသည္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ႏွင့္ ၇ မုိင္ခန္႔ေ၀းကြာသည့္ ငုကၡေလးေက်းရြာတြင္တည္ရွိသည္။ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးသည္ ငုကၡေလးေက်းရြာတြင္အေျချပဳ၍ တ႐ုတ္တုိ႔၏က်ဴးေက်ာ္မႈအား ႏွိမ္နင္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ က်ဆုံးစစ္သည္တုိ႔အားရည္စူး၍ သေျပညီေနာင္ေအာင္ေဇယ်မုနိ ေစတီေတာ္ အားတည္ထားခဲ့ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း သိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္မ်ား မီးေဘးသင့္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္စဲကုန္းေက်းရြာမွ ဆရာေတာ္ ဦးပႏၷ၀မွႏွင့္ ဦးပဥၨင္းတစ္ပါး၊ ကုိရင္ႀကီးတစ္ပါးႏွင့္ သီလရွင္တစ္ပါးတုိ႔ေတာရေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္သတင္းသုံးခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ဦးပႏၷ၀ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဘုရားႀကီးမွာ ေခတၱတိမ္ျမဳပ္ေနခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္မွအႀကီးအကဲမ်ား ၀ုိင္း၀န္း လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြန္းမံခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလတြင္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စုေပါင္းလွဴဒါန္းမႈမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြန္းမံတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴပူေဇာ္ပြဲ အားေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၂၃
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ နောင်ချိုမြို့နယ်၊ ငုက္ခလေးကျေးရွာအနီးရှိ သပြေညီနောင် အောင်ဇေယျမုနိစေတီတော် ရွှေထီးတော် နှင့် ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာတင် အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ နိုင်ငံတော်သြဝါ ဒါစရိယ၊ နောင်ချိုမြို့၊ ဘန့်ဘွေးကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တဥတ္တရအမှူးပြုသော သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်များကြွရောက် ချီးမြှင့်တော်မူကြပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့်ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့် ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦးနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ် အောင်ဇော် အေး၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်စွာလင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များနှင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများ စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာတက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ အခမ်းအနား တက်ရောက်လာကြသူများသည် ဆရာတော် သံဃာတော်များအားနေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူ ဒါန်းကြသည်။ အဆိုပါသပြေညီနောင်အောင်ဇေယျမုနိဘုရားသည် နောင်ချိုမြို့နှင့် ၇ မိုင်ခန့်ဝေးကွာသည့် ငုက္ခလေးကျေးရွာတွင်တည်ရှိသည်။ အလောင်းမင်းတရားကြီးသည် ငုက္ခလေးကျေးရွာတွင်အခြေပြု၍ တရုတ်တို့၏ကျူးကျော်မှုအား နှိမ်နင်းအောင်မြင်ပြီးနောက် ကျဆုံးစစ်သည်တို့အားရည်စူး၍ သပြေညီနောင်အောင်ဇေယျမုနိ စေတီတော် အားတည်ထားခဲ့ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း သိမ်၊ ကျောင်း၊ ဇရပ်များ မီးဘေးသင့်ပျက်စီးခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်ခန့်တွင်နောင်ချိုမြို့နယ်၊ စစ်စဲကုန်းကျေးရွာမှ ဆရာတော် ဦးပန္နဝမှနှင့် ဦးပဉ္ဇင်းတစ်ပါး၊ ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးနှင့် သီလရှင်တစ်ပါးတို့တောရကျောင်း ဆောက်လုပ်သတင်းသုံးခဲ့ပြီး ဆရာတော်ဦးပန္နဝပျံလွန်တော်မူပြီးနောက် ဘုရားကြီးမှာ ခေတ္တတိမ်မြုပ်နေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တပ်မတော်မှအကြီးအကဲများ ဝိုင်းဝန်း လှူဒါန်းမှုဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်မွန်းမံခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ)မိသားစုများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ စုပေါင်းလှူဒါန်းမှုများဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်မွန်းမံတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ရွှေထီးတော်တင်လှူပူဇော်ပွဲ အားအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေး အတွင်းဝန် H.E. Mr. Vijay Gokhale အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်(ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း(မှော်ဘီ)၊ ဘွဲ့ရအမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅) စစ်လက်ရုံး ရွေးချယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်စိစစ်ရွေးချယ်
နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၂၀ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ